Itoobiya: Tirinta codadka oo socota - BBC News Somali
Itoobiya: Tirinta codadka oo socota
25 Maajo 2015
Lahaanshaha sawirka Atosh
Waxaa albaabada loo soo xiray inta badan xarumaha codbixinta doorashada guud ee dalka Itoobiya, inkasta oo meelaha qaar ay maanta furanyihiin.
Wali waxaa socota tirinta codadkii la dhiibtay, gudiga doorashada ee dalkaasi ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen sideetan boqolkiiba dadkii horay isu diiwaangaliyay.
Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa cododkooda ka dhiibtay doorashadan oo ah tii u horaysay ee guud tan iyo intii uu geeriyooday hogaamiyahoodii mudada dheer talada hayay ee Males Zenawi.
Wariyaha BBC-da uga soo waramaya magaalada Adhis Ababa waxa uu sheegay in dadku ay fiilooyin dhaadheer ugu jiraan goobo badan oo codka laga dhiibanayo.
Rai’sal wasaarihii Males, badalay Xaylemaryan Dhesaalayn, ayaa la filayaa in uu guul wayn gaaro.
Xisbigiisa EPRDF ayaa talada hayay tan iyo 1991, Laakiin mucaaradku waxa ay leeyihiin xoriyad la'aanta saxaafadda ayaa ka dhigan in aysan kolna doorashadu noqonaynin mid xalaal ah oo si xor ah u dhacda.
Bekele Nagaam, oo u sharaxan xisbiga ugu wayn mucaaradka ee Medrek, ayaa sheegay in goobaha qaar dadka lagu qasbay in ay dawladda u codeeyaan.
Gudiga doorashada ayaa sheegay in ay isdiiwaan galiyeen ku dhawaad 3 milyan. Wariyaha BBC-da Cabdirisaq Xaaji Catoosh oo ku waabariistay Magalaada Qabridahar oo ku taala xudunta deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ay dadku u kalaheen goobaha codadka laga dhiibanayo, inkasta oo uu jiray dib u dhac ku yimid goobaha qaar.
Image caption Xisbiga Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la filayaa in uu guul wayn gaaro
Magaaladaasi waa deegaankii xildhibaan ahaan looga soo doortay Madaxwaynaha Deeganaa Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, oo ay xildhibaanadada deegaankuna ay madaxwaynenimo u sii doorteen.
Shalay ayuuna codkiisa ka dhiibtay Qabridahar isaga oo xildhibaanimo u sharaxan markale.
Waa madaxwaynihii koobaad ee xilkiisa dhamaysta oo shansano oo xiriir ah talada deegaanka haya.
Catoosh waxa uu ka anbabaxay Qabridahar waxa uuna gaadhi ku sii maray Shaygoosh, Dhagax-buur iyo Qabribayax, waxa uu sheegay in ay dadku safaf dhaadheer ku jireen shalay, balse aysan indhihiisu qaban wax mucaaradka u sharaxan.
Yaa la soo dooranayaa
Doorashadan guud waxaa loo codaynayaa xildhibaanada Federaalka iyo kuwa Dawlad Dgaanada.
Xildhibaanada heer federal ku guulaysta waxa ay doorandoonaan Rai’sal wasaare.
Xildhibaanada heer deegaana waxa ay soo dhisi doonaan Madaxwayneyaasha.
gudiga doorashada ayaa hadda laga warsugayaa in ay shaaciyaan natiijada doorashada.